Fiharovana mafy - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
« Fa ny fifaliana avy amin’i Jehovah no fiharovana mafy ho antsika », io no anaran’ny hetsika lehibe izay notontosaina tetsy Antsahamanitra ny talata 01 Novambra 2011 lasa teo. Hetsika izay nokarakarain’ny rantsana Oliva Nasionaly, ny mpitendry zava-maneno foibe Apokalypsy, ary ny Radio Fanambarana.
Hita tamin’ireo olona maro be nanotrona ity hetsika ity izany fifaliana izany. Nanokatra ny fotoana tapany maraina ny ankizy izay nahazo ny laharana voalohany tamin’ny fifaninana kabary notontosain’ny mpikarakara fandaharana ho an’i ankizy “Fa an’ny toa Azy”. Tao aorian’izay ny tantara mitondra ny lohateny hoe “Nabala”. Teo ihany koa ny kaoferansa mahakasika “Ny fialana amin’ny olana sy ny tahotra”, izay marihina fa ny mpiandraikitra ny zana-pandaharana Isika Tanora ao amin’ny Radio Fanambarana no nitondra izany. Ny tapany hariva kosa no nifandimby niaka-tsehatra ireo mpandray anjara maro be, izay nahitana ny Radio Fanambarana Antsirabe, ny mpihiran’i Jehovah avy any Toamasina, ny Choral 3A Ambohimanambola, ny Groupe midera Alasora, ny tarika Pray’f, ary ny Radio Fanambarana Antananarivo.
Tonga nanotrona sy nandray anjara tamin’ity hetsika ity ihany koa ireo Ray aman-dReny eo anivon’ny Fiangonana Apokalypsy notarihin’ny Pasitera Mailhol filoha iraisam-pirenen’ny Fiangonana Apokalypsy, pasitera Alpha RAKOTONIRINA, ny loholona Norbert. Io fotoana io ihany koa no nanolorana ny mari-pankasitrahana ho an’ireo nahazo ny laharana telo voalohany tamin’ny fifaninana sary famantarana ireo rantsana telo mitambatra, dia ny Rantsana Oliva, ny mpitendry zava-maneno ary ny Radio Fanambarana.
Ny kaoferansa hiarahana amin’ny Ray aman-dReny Pasitera Mailhol, etsy amin’ny Foibe Apokalypsy Ambodinisotry ny alahady 06 novambra 2011, no fandaharam-potoana manaraka
Publié dans ApokalypsyÉtiqueté avec antsahamanitra, fiharovana mafy